မြန်မာနိုင်ငံ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်ရှိ မော်တော်ယာဉ် အပိုပစ္စည်း လုပ်ငန်းရှင်များ ခင်ဗျာ - Yangon Region Automotive Components, Spare parts & Accessories Association
မြန်မာနိုင်ငံ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်ရှိ မော်တော်ယာဉ် အပိုပစ္စည်း လုပ်ငန်းရှင်များ ခင်ဗျာ
ကျွန်တော်များ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မော်တော်ယာဉ် အပိုပစ္စည်း လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း (Yangon Region Automotive Components, Spare Parts & Accessories Association – YACSAA) ၏ ပထမအကြိမ် အသင်းသားစုံညီ နှစ်ပါတ်လည် အထွေထွေ အစည်းအဝေးနှင့် ညစာစားပွဲအား နိုဝင်လာ (၁၇) ရက်နေ့ (တနင်္ဂနွေနေ့) တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ မော်တော်ယာဉ် အပိုပစ္စည်း နှင့်ဆက်စပ်သောတင်သွင်းဖြန့်ချီရောင်းချသောလုပ်ငန်းရှင်များ၊ Service and Workshop များအနေဖြင့် အသင်းဝင်ထားသည်ဖြစ်စေ မဝင်ထားသည် ဖြစ်စေ စိတ်ပါဝင်စားသူ မည်သူမဆို တက်ရောက် နိုင်ရန် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည် ခင်ဗျာ။
အထွေထွေ အစည်းအဝေးအား နိုဝင်ဘာ (၁၇) ရက်နေ့ နေ့လည် ၃ နာရီမှ ၅ နာရီအထိ ရန်ကုန်မြို့ တာမွေမြို့နယ်ရှိ Sky Star Hotel အရှေ့မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်းတွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး မည်သူမဆို အခမဲ့ တက်ရောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသင်းဝင်ရန် စိတ်ပါဝင်စားသူများအနေဖြင့် ပွဲတွင် အသင်းဝင်ရောက်နိုင်ပြီး စိတ်ဝင်စားဖွယ် မော်တော်ယာဉ် အပိုပစ္စည်း ပြခန်းများလည်း ရှိနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသင်းရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေ ရှေ့ဆက် လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်း လေ့လာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အသင်း၏ အသင်းသားစုံညီ ညစာစားပွဲအား နိုဝင်ဘာ (၁၇) ရက်နေ့ အစည်းအဝေးအပြီး ညနေ (၆) နာရီတွင် ရန်ကုန်တိုင်း တာမွေမြိုနယ့်ရှိ Color Stones စားသောက်ဆိုင်တွင် ဆက်လက်ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူမျိုးမရွေး ဘာသာမရွေး စားသုံးနိုင်မယ့် Menu များနှင့် Unplugged Band ရဲ့ ဖျော်ဖြေမှုတွေပါဝင်မယ့် ညစာစားပွဲကိုတော့ Association Member နှင့် Ordinary Member များမှအခမဲ့တက်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး အသင်းမဝင်ထားသူများအနေနဲ့ တစ်ယောက်ကို (၁၅,၀၀၀ ) ကျပ်နှုန်းဖြင့် ပေးသွင်း တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ အသင်းသားစုံညီ ညစာစားပွဲအား အသင်းဝင်များနှင့် လုပ်ငန်းတူမိတ်ဆွေများ ရင်းရင်းနှီးနှီး ချစ်ချစ်ခင်ခင် တွေ့ဆုံ မိတ်ဆက်ပြီး စားသောက် ပျော်ပါးနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
အခမ်းအနားတက်ရောက်ရန်စိတ်ဝင်စားသည့် မိတ်ဆွေများအား ကျွန်တော်များ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မော်တော်ယာဉ် အပိုပစ္စည်း အသင်းကနေ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ် ခင်ဗျာ။
August 19, 2021Covid -19 Third Wave ကာလအတွင်းအသင်းမှ အသင်းသူ/အသင်းများ၏ အကျိုးကိုရှေးရှု၍ Oxygen Cylinder + Gas (40 Liters) အလုံး (၂၀) အား ၁၉-၈-၂၀၂၁ (ကြာသပတေးနေ့) မှစတင်ပြီး ငှားရမ်းပေးရန် စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်
November 11, 2020မြန်မာနိုင်ငံ၏ အင်ဂျင်ဝိုင် အခန်း ကဏ္ဍလေ့လာသုံးသပ်ချက် Webinar အား အသင်း Facebook Page မှ တစ်ဆင့် Live ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်သွားမည်
June 16, 2020COVID 19 အလွန် ယာဉ်အပိုပစ္စည်းစျေးကွက် လေ့လာသုံးသပ်ချက်
March 12, 2020The 2nd YANGON INTERNATIONAL MOTOR SHOW 2020
February 19, 2020မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ် တပ်ဆင်ခြင်း ကဏ္ဍအတွက် အရည်အသွေး စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် International Automotive Task Force (IATF:16949) အကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲနှင့် သင်တန်း
Covid -19 Third Wave ကာလအတွင်းအသင်းမှ အသင်းသူ/အသင်းများ၏ အကျိုးကိုရှေးရှု၍ Oxygen Cylinder + Gas (40 Liters) အလုံး (၂၀) အား ၁၉-၈-၂၀၂၁ (ကြာသပတေးနေ့) မှစတင်ပြီး ငှားရမ်းပေးရန် စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အင်ဂျင်ဝိုင် အခန်း ကဏ္ဍလေ့လာသုံးသပ်ချက် Webinar အား အသင်း Facebook Page မှ တစ်ဆင့် Live ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်သွားမည်
COVID 19 အလွန် ယာဉ်အပိုပစ္စည်းစျေးကွက် လေ့လာသုံးသပ်ချက်
မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ် တပ်ဆင်ခြင်း ကဏ္ဍအတွက် အရည်အသွေး စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် International Automotive Task Force (IATF:16949) အကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲနှင့် သင်တန်း
No.(SH,B-3), Malikha Housing, Yadanar Road,
Thingangyun Township, Yangon.
09 89200 6864
Copyright 2019 - YACSSAA. All Rights Reserved.